डा. केसीको समर्थनमा नाङगो जुलुस, उपचार टोली फिर्ता, प्रतिष्ठान ठप्प – KarnaliPost Daily
डा. केसीको समर्थनमा नाङगो जुलुस, उपचार टोली फिर्ता, प्रतिष्ठान ठप्प
१९ असार २०७५, मंगलवार ०८:०३ July 5, 2018 by Karnali Post Daily
जुम्ला । ४ दिनयता जुम्लामा अनशनरत डा.गोविन्द केसीको समर्थनमा नाङगो जुलुस प्रदर्शन गरिएको छ । चिकित्सकहरु र डा. केसीका शुभचिन्तक समर्थकहरुले केसीको माग सम्बोधनका लागि राज्यलाई दबाब स्वरुप शरीरमा सांङलो तथा मुखमा कालोपट्टी बाँधेर नाङगो जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन् । केसी अनशनरत स्थानबाट शुरु गरीएको नाङगो जुलुस स्थानीय प्रशासनले निशेधित क्षेत्र घोषणा गरेको स्थानसम्म पुगेको थियो ।
नाङगो जुलुस प्रदर्शन भएपछि आन्दोलनले उग्ररुप लिनसक्ने भन्दै सम्भावित घटनाबाट बच्न बाक्लो प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
यस्तै केसीको उपचारमा स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगरेको भन्दै उनको उपचारमा खटिएको चिकित्सक टोली फिर्ता भएको छ । केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको र उनको उपचारका लागि तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानास्तरण गर्न पटकपटक माग गरेपनि प्रशासनले सहयोग नगरको भन्दै चिकित्सकहरुको टोली फर्किएको हो । कभर्डहलमा उपचार सम्भव छैन, भनी टोलीले प्रशासनलाई खबर गरेपनि प्रशासनले अस्पताल लैजान दिएको छैन । साथै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आकस्मीक सेवा बाहेक अन्य सबै सेवा चिकित्सकहरुले ठप्प पारेका छन् ।
कालिकोटमा सुरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा कर्णाली प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई तत्तकाल काममा फर्किन अदालतको आदेश एक अर्ब ५९ करोडमा कर्णाली रङ्गशाला निर्माण सुरु कर्णाली प्रतिष्ठानका नियमित काममा कुनै बाधा छैन्ःनिमित्त उपकुपति थापा मोहन वैद्यलाई भेट्न अस्पताल पुगे गृहमन्त्री